ပါဝါ:37kw + 1.5kw + 0.4kw သုံးအဆင့်
အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်:ငါးအစာကျွေးခြင်း ,ကြောင်အစာ ,ခွေးစာ ,အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ
ကုန်ကြမ်းများ:ဘောဇဉ် ,ပဲ,ပြောင်းဖူးမှုန့်,အသား,အရိုးအစားအစာများ ,ငါးဆိုလိုသည်, ငါးဆီ,စသည်တို့
ငါးအစာတွင်ရေနံစိမ်းကြွယ်ဝသောပရိုတင်းပါဝင်သည် , ဒါပေမယ့်ငါးအစားအစာထဲမှာရေနံစိမ်းပရိုတိန်းငါးများအတွက်အစာကြေဖို့ခဲယဉ်းသည်. ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစာပါ ၀ င်သည့်အရာများအားခွဲခြားခြင်းမပြုရန်, လူများသည်ငါးအစာတောင့်ပြုလုပ်ရန်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုအသုံးပြုကြသည် ,အရာအစာကျွေးခြင်း၏ gelatinization နှင့်အစာခြေတိုးပွားစေနိုင်သည်,ငါးများသည်အစာမှအပြည့်အဝရောထွေးသောအာဟာရကိုရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ငါးအစာတောင့်သည်ဖိညှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။, အပူ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိတောင့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်သို့ feed ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများထုတ်ယူနှင့်ပုံသွင်း, အစိုဓာတ်နှင့်ဖိအားပေးမှု။ ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်မှထုတ်လုပ်သောအစာများသည်အစာအာဟာရပေါများသောကြောင့်ငါးအများစုအတွက်အဓိကကျသည့်အစာဖြစ်လာသည်။,မြင့်မားသောအစာချေခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောရေပေါ်အချိန်,လွှဲပြောင်းရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသည် .
ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်သည်ငါးကဲ့သို့သော aqua တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ငါးခူ, တီလားပီးယား,ပုစွန်, ဂဏန်းနှင့်စသည်တို့,ဒါ့အပြင်ကြောင်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, ခွေးနှင့်ငှက်စသည်တို့. အဆိုပါကုန်ကြမ်းဂျုံနိုင်ပါတယ်, ပြောင်းဖူး ,ဆန်,ပဲပုပ်ကိတ်မုန့် ,အရိုးမုန့်ညက် ,ငါးမုန့်ညက် ,ငါးဆီနှင့်စသည်တို့, မာကြောသောလုံးလေးများသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မျောပါသွားနိုင်သည် 20 နာရီ. ဤငါးအစာတောင့်စက်သည်အစေ့များမှလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပရိုတိန်းနှင့်သကာ. ထုတ်လုပ်ငါးများအစာတောင့်နှင့်အတူအစာတောင့်, ထူးခြားတဲ့အရသာရှိသည်,အာဟာရကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြသည် ,ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ာန်နှင့်အတူ.
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်ပြီးဤအခြေခံကိုလည်ပတ်သည်။ လျှပ်စစ်မီးသည်အဆင်မပြေသောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသည်။, သုံးအဆင့်ပါဝါကိုမသုံးရှိရာ, သို့သော်ဖြတ်စက်စွမ်းအင်သည်လျှပ်စစ် drive.The တည်ဆောက်ပုံကိုလိုအပ်သည်။ စက်၏ဒီဇိုင်းသည်သိပ္ပံနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်, သေးငယ်တဲ့ကြမ်းပြင်andရိယာနှင့်မြင့်မားသော output ကိုအတူ,အနိမ့်အလုပ်လုပ်ဆူညံသံ, နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်. ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းသည်အလွန်မြင့်ပြီးမျက်နှာပြင်သည်တောက်ပ။ သန့်ရှင်းသည်, အရာသိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ကောင်းပါတယ်. ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ မှိုအရွယ်သည် ၀.၉-၁၅ မီလီမီတာရှိသည်, အရာအရည်အသွေးမြင့်မား feed ကိုတောင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် ,အရာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပါတယ်, ယူနီဖောင်းနှင့်တောက်ပ.
1.ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်ပြုလုပ်သောတောင့်အရွယ်အစားအရရွေးချယ်နိုင်သည်။ တောင့်အရွယ်အစားသည် ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာဖြစ်နိုင်သည်။, ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွင်အစာများများမှုန့်မှုန်ခြင်းသည်ကြက်ဘဲအစာများထက်သေးငယ်သင့်သည်.
2.ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်လုံးလေးများ feed ကို,ပိုမိုမြင့်မားစည်းလုံးခြင်းနှင့်ရေခုခံ. Extruded pellet သည်ရေပေါ်တွင်ရေပေါ်မျောပါသွားနိုင်သည် 20 နာရီ.
3.ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, သေးငယ်သောအထပ်မျက်နှာပြင်။ အသုံးပြုသူသည်ရေငန်ငါးအစာတောင့်ထဲသို့ရေပိုထပ်ထည့်ခြင်းမရှိဘဲငါးအစာလေးများပြုလုပ်ရန်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်ပစ္စည်းများသုံးနိုင်သည်. ခြောက်သွေ့သောတောင့်တင်းအစာသည်သိုလှောင်ရန်အဆင်ပြေသည်.
4.ဤသည်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုခွေးအဘို့အတောင့်အစာကျွေးစေရန်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည် ,ကြောင်,အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ,ငှက်နှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားသောတိရစ္ဆာန်အစာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, နှင့်အစာကြေရန်လွယ်ကူသည်. မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်ခြင်းသည်ဆော်လမွန်ရောဂါနှင့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကိုသေစေနိုင်သည်.
အသုံးပြုသူသည်ကုန်ကြမ်းများကို feed hopper သို့ကျွေးသည်,feed ကိုရိုးတံအဆိုပါ extruding ဝက်အူ၏ပွတ်အင်အား၏ action ကို parts.Under extruding မှပစ္စည်းများအစာကျွေးပါလိမ့်မယ်, ပစ္စည်းများ၏ဓာတ်၏မှည်မှဝက်အူနှင့်အပူပန်းကန်အကြားမြင့်မားသောအပူချိန်, နှင့်ပရိုတိန်း congealed ဖြစ်လာသည်. ထိုအခါငါးအစာကျွေးမှို၏တွင်းထဲကနေထုတ်ယူဖြစ်ပါတယ်. ငါးအစာလေးများသည်ငါးအစာတောင့်စက်မှထုတ်လွှင့်သည်. အသုံးပြုသူသည်ကျွေးသောဓါး၏ထောင့်ကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်အစာတောင့်၏အရှည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) အဓိကပါဝါ
30-5040.4 0.4 နေ့ 40